CUA : miara-mientana amin’ny fanadiovana ny vehivavy | NewsMada
Efa nisokatra ny faran’ny herinandro teo nanoloana ny lapan’ny Tanàna Analakely ny fankalazana ny Andron’ny vehivavy, nokarakarain’ny kaominina Antananarivo Renivohitra, eo ambany fifehezan’ny ben’ny Tanàna, Ravalomanana Lalao.
Misy ny varotra fampirantiana karazan’entana maro haranty amin’ny tranoheva 20 mahery. Misy fitsaboana maimaimpoana hataon’ny BMH. Eo koa ny fandrindram-piterahana, ny fitiliana katarakta sy ny fitiliana diabeta ary ny fitiliana ny tsimokaretina VIH/Sida.
Marihina fa mitohy mandritra ny efatra andro ny hetsika fankalazana ny 8 marsa etsy amin’ny lapan’ny Tanàna.
Omaly, nisy ny fanadiovana faobe natao teny amin’ny Esplanade Analakely sy ny sehatra maitson’ny Avenue Analakely. Niaraha-nientana tamin’ny fikambanana Dioviko Iarivo ny fanadiovana. Nanolotra kifafa 200 sy sobika 100 izy ireo tamin’izany. Tonga teny an-toerana ihany koa ny mpamonjy voina izay nanampy tamin’ny fanadiovana sy ny BMH izay namafy DDT ny toerana vao nolalovana.
Tsy mbola voahaja ny resaka fahadiovana eto Antananarivo ka anisan’ny antony nanaovana ny hetsika manokana. Mbola miaina anaty gaboraraka ny mponina. Na eo aza ny fifehezana hataon’ny kaominina, misy hatrany ny mihoa-pefy ka manao maloto eny afovoan’Analakely indrindra ireo mpatory an-tsena.
Anio, hisy ny diabe iarahana amin’ny ben’ny Tanànan’Antananarivo miala eny Mahamasina mihazo ny lapan’ny Tanàna Analakely, ny maraina. Hisy ny fanentanana maro iarahana amin’ireo mpanakato . Hotolorana loka ihany koa ireo mpilalao tafavoaka amin’ny fifanintsanana…
Ny hariva, hisy ny adihevitra mikasika ny vehivavy iarahan’ny amin’ny mpiasan’ny kaominina sy ka hanasana ny fikambanam-behivavy.